August 20, 2019 - ThutaStar
ဂုတ်တွင်းရဲစခန်းမှ ကျဆုံး ခဲ့တဲ့ ရဲတပ်သားရုပ်အလောင်း မီးသင်္ဂြိုလ်
(၁)လသား အရွယ် သမီးလေး နဲ့ ဇနီးကျန်ခဲ့တဲ့ ဂုတ်တွင်းရဲစခန်းမှ ကျဆုံး ရဲတပ်သားရုပ်အလောင်း မီးသင်္ဂြိုလ် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊နံနက်ပိုင်းက ဂုတ်တွင်းရဲကင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွင် ကျဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်သား ဇော်ထက်ဦး အသက် ၂၄ နှစ်အား သြဂုတ် ၁၇ ရက်၊မွန်းလွဲ ၂ […]
မုဒိန်းမှု​နဲ့ ရလာတဲ့ ကိုယ်​ဝန်​ ပျက်​ကျခြင်း​ကြောင့်​ ​ထောင်​ဒဏ်​ကျခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး ပြစ်​ဒဏ်​​ပယ်​ဖျက်​​ပေးခြင်းခံရ…
မြောက်​အ​မေရိကတိုက်​ အလယ်​ပု်ုိင်းက အယ်​လ်​ဆာ​ဗေးဒိုးနိုင်​ငံဟာ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချခြင်းကို အတင်းကျပ်​ဆုံးတားမြစ်​ထားတဲ့ နိုင်​ငံတစ်​ခုဖြစ်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချခြင်း လုံးဝတားမြစ်​ထားပြီး အဲ့ဒီ ကိုယ်​ဝန်​ဟာ အဓမ္မြ့ပုကျင့်​ခြင်းခံရလို့ ရလာတဲ့ကိုယ်​ဝန်​ဖြစ်​​နေရင်​​တောင်​၊ အဲ့ဒီ က​လေးကို​မွေးလိုက်​ရင်​ မိခင်​က​သေဆုံးနိုင်​​ချေရှိရင်​​တောင်​ ဥပ​ဒေအရ လုံးဝဖျက်​ချခွင့်​မရှိတာပါ။ အယ်​လ်​ဆာ​ဗေးဒိုးနိုင်​ငံရဲ့သမိုင်းမှာ​တော့ ပထမဆုံးအ​နေနဲ့ အဖြစ်​အပျက်​ တစ်​ခုဖြစ်​ပွားသွားခဲ့ပါတယ်​။ အဲ့ဒါက​တော့ အဓမ္မပြုကျင့်​ခံရတာက​နေတဆင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရရှိသွားခဲ့တဲ့ အသက်​ […]
ကွာရွင်းပြီးမှ အရင်ကထက်ပို ဆွဲဆောင်မှုရွိတဲ့အလှမျိုးနဲ့ မြင်တွေ့ရတဲ့ဆောင်းဟယ်ကြို
ကွာရွင်းပြီးမှ အရင်ကထက်ပို ဆွဲဆောင်မှုရွိတဲ့အလှမျိုးနဲ့ မြင်တွေ့ရတဲ့ဆောင်းဟယ်ကြို “ဆောင်းဦးရွက်ကွှေ ချစ်သက်သေ” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အတူ ကိုးရီးယားကား ကြိုက်နွစ်သက်သူ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အချစ်ဦးလို့ဆိုရမယ့် သရုပ်ဆောင် ဆောင်းဟယ်ကြိုကိုတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုအပ်မယ် မထင်ပါဘူး။ နာမည်အရင်းကေတာ့ ‘ဆောင်းဟယ်ကြို’ ဆိုပေမဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေကေတာ့ သူမကို ‘အွန်စော’ လို့သာ မွတ်ထားကြပါတယ်။ […]
သင့်ရဲ့ချစ်သူ သူ့အဆက်ဟောင်းကို မမေ့သေးဘူး ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် ကိုယ်လက်ရှိ တွဲနေတဲ့ ရည်းစားက အရင်ရည်းစားကို မမေ့နိုင်သေးတာ တော်တ်ာကို ဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ သူ့ရဲ့အဆက်ဟောင်းကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သတိရနေရင် သူ့ကို သင်ဆက်ပြီး လက်မတွဲသင့်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ လူတိုင်း သတိရတတ် ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
လူမြင်ကွင်းမှာ ကလေးနို့တိုက်တာဟာ ရှက်စရာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့ မိခင်တွေကို အသိပညာပေးခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က မိခင်များ …
ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ရဲ့ မြို့တော် မနီလာ မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မိခင်တွေ စုဝေးပြီး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကတော့ လူအများရှေ့မှာ ကလေးနို့တိုက်တာဟာ ရှက်စရာလို့ထင်နေတဲ့ မိခင်တွေကို အသိပညာပေးလိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဆိုရင်လည်း ကလေးမွေးထားတဲ့မိခင်ပေါင်း ၂၃၀၀ လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လူအများရှေ့မှာ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို […]
ဒါမျိုးတွေက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးတာပါ တကယ်အပြင်မှာ တွေ့တော့ ရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာဗျာ…….
မိသားစုတစ်ခုအတွက် ပေးဆပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီး အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာချိန်တွင် အရုပ်လေး တစ်ရုပ်ကို အဖော်ပြုကာ အိမ်နောက်ဖေး အဆောင်လေး တစ်ခုအတွင်း နေထိုင်နေရသော အဘွား ဒါမျိုးတွေက ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးတာပါ တကယ်အပြင်မှာ တွေ့တော့ ရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာဗျာ ဘ၀ တစ်လျောက်လုံး မိသားစုတစ်ခုအတွက် ပေးဆပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီး […]
အမိန့်စာပြန်တော့ သမီးလေးရဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေမပြောနဲ့ယောကျာင်္းရင့်မာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်တောင်ကြားထဲက မျက်ရည်ဝဲမိတယ်…
သမီးလေးတော့ မေ့ဆေးနဲ့မတည့်လို့ (သူတို့ဖြေရှင်းပုံအရ ) ဆုံးခဲ့ရပြီ.. မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ သေခြင်းတရားက်ို ပြန်ရှင်အောင် ဖန်တီးလို့ မရတော့ပေမယ့် နစ်နာသွားခဲ့ရတဲ့ ကလေးမိဘတွေအပေါ်မှာ ဆေးရုံဘက်ကနေပြီး ကျေနပ်လောက်သည်အထိ ဘယ်လိုတွေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်..။ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ထပ်ပြီး တောင်းဆိုပါတယ် မနက်က သမီးလေး […]
ဒဏ်ရာရနေတဲ့ရွာသားအချို့ကို အလံဖြူထောင်ပြီး သွားကယ်တဲ့ ပရဟိတကား သေနတ်နဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခံရ…
ကွတ်ခိုင်နဲ့ နမ့်ဖတ်ကာအကြားတိုက်ပွဲတွေအကြား ဖားဖိန်ရွာနဲ့ ကုံးစုံရွာက ကျည်ဆံထိမှန်ခံရပြီး ပိတ်မိနေ တဲ့ တောင်သူ ၂ ဦးကို ကယ်ထုတ်ဖို့ အလံဖြူထောင်ပြီးသွားရောက်ခဲ့တဲ့ အသင်းကားတွေကို သေနတ်နဲ့ အချက်များစွာအပစ်ခံရလို့ ပြန်လှည့်လာရတယ်လို့ ကရုကာလူမှုကူညီရေးအသင်း ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဦးသောင်းထွန်းက ဘီဘီစီကို ဒီကနေ့ သြဂုတ် ၂၀ ရက်နေ့ နေ့လယ် […]
ကင်ဆာသမားတွေ ရဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်ကို စိတ်ရင်း အမှန်နဲ့ ဝေမျှ ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မီးမီးခဲ
“အချစ်ကိုသိချိန်”၊ “ငါ့အကြောင်းနဲ့ငါ့ကံ” ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေရ င်ထဲရောက်အောင် သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မီးမီးခဲကို အားလုံးပဲသိကြမှာပါ…။ သိပ်မကြာခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ “ငါ့ရဲ့မျက်ဝန်းညို” ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်…။ စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ပဲ အဆိုတော်မီးမီးခဲ က ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်…..။ ကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရပေမယ့် သူမကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အတွက် […]
၅ မိနစ်အတွင်း ခြေထောက်နဲ့လက် ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း..
၅ မိနစ်အတွင်းဆိုတော့ မှတ်သား ထားသင့်ပါတယ် နော် ။ သင့်ခြေထောက် လက် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က ညိုတဲ့နေရာတွေ ဆဲသေတွေကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှား နိုင်ပါတယ် ။ အဆင့် နှစ်ဆင့်က ဒီလိုပါ …. အဆင့် ( ၁ ) […]